> Resource > Video > Hel Video weyn 1080p ayeey Software in Edit 1080p Videos
Waxaan uploaded qaar ka mid ah videos 1080p anna waxaan soo qaaday ka digital video camera in aan computer. Waxaan doonayaa in aan ku daro saamaynta qaar ka mid ah iyaga, sidaas darteed waxaan isku dayay inaan Roxio iyo dib Dhibaatooyinka CS4. Laakiin labada barnaamij, oo iyagu uma ay si fiican u ciyaaro. Qof kasta oo ogaan barnaamij fiican 1080p video software tafatirka?
1080p video hadda si fudud loo wada koobi Karin qalabka caadiga ah sida taleefanka gacanta ama kaamirada macaamiisha. Laakiin qaar ka mid ah software tafatirka ee yaabaa in ay dhibaato soo degida ama sixiddiisa noocan oo kale ah video mararka qaarkood. Haddii aad raadinayso software 1080p video tafatirka weyn, heer sare ah Waxa aan ku talinayaa ku Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Halkan waxa ku jira qaababka ugu muhiimsan ee barnaamijka:
Samee filimada gaar ah oo isticmaalaya badan formatted video, sawir iyo clips audio.
Si fudud isku shaandheyn, kala, dalagga iyo jar audio, videos iyo sawiro ku saabsan waqtiga
Samayso videos shaqsi ah la filtarrada, sawir-sawirka, kala guurka iyo qaababka badan
La wadaag Abuuridda meel kasta YouTube, aad TV, iPhone, Facebook iyo meelo kale
Tallaabooyinka Easy in xaalkaa 1080p videos arrintan 1080p software video tafatirka
Ka dib wareejinta video ka fiidiyo ama qalab kale, riix badhanka Import ah. Markaas waxaad ku eegaan karo iyo doortaan diirada video files, guji Open si ay u dar barnaamijka. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi files si aad u furmo suuqa hoose.
2 Tafatir 1080p video on waqtiga
Ka hor inta tafatirka, waa in aad la jiidayo ee clips keeno in waqtiga. Ka dib markii in, aad jari karaa, jar, tirtirto, habayno clips aan dhibaato on waqtiga.
Saar aad dulqabo on waqtiga, daawato aad video furmo Xiisaha inta la ciyaaro, waxaad dooran kartaa looxyada gaar ah falinjeeerka ama goynta. Haddii video la toogtay taagan ama ka yeellay, si fudud ayaad ku dhajisan karaa meesha uu xaq u garaacida button beddesha ka. Haddii video la toogtay deegaanka mugdi ah, xitaa waxa aad qabsato karaa si ay u sii dhalaal by qabsado duwan iyo iftiin. Buugaag iyo xawaaraha sidoo kale si fudud loo beddeli karin.
Waxaad tegi kartaa Saamaynta ay isha ku darto saamaynta gaar ah sida quman Light, oo hoos roobka, barafka iyo ka badan si aad videos shakhsiga ah oo gaar ah. Ama loo baddasho tab guurka iyo ka soo xusho 50 + saamaynta goobta guurka bixiyo.
3 Save ama wadaagno videos cusub
Ka dib marka aad ku dhameysan tafatir ah, guji Abuur ah si loo badbaadiyo abuurkiinna cusub. Waxaad u badbaadin karaa qaabab kala duwan, si toos ah u geliyaan in YouTube ama Facebook ama gubi in DVD sida aad jeceshahay.